1 Tantara 7 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (1Ta 7)
Ary ny zanakalahin'i Tola dia Ozy sy Refaia sy Jeriela sy Jamay sy Jibsama ary Samoela, samy lohan'ny fianakaviany avy, dia zanak'i Tola sady samy lehilahy mahery tamin'ny fokony avy ireo; enin-jato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin'ny andron'i Davida.
Ary ny zanakalahin'i Ozy dia Jizrahia. Ary ny zanakalahin'i Jizrahia dia Mikaela sy Obadia sy Joela ary Jisia; dimy izy; loholona avokoa izy rehetra ireo.
Ary nanana miaramila antokotokony izy araka ny fireneny sy ny fianakaviany avy, dia enina arivo amby telo alina; fa maro ny vady aman-janak'ireo.
Ary ny rahalahiny ao amin'ny fokon'ny Isakara rehetra, izay samy lehilahy mahery, ny isan'izy rehetra araka ny firazanany avy dia fito arivo amby valo alina.
Ny zanakalahin'i Benjamina dia Bela sa Bakera ary Jediaela; telo izy.
Ary ny zanakalahin'i Bela dia Ezbona sy Ozy sy Oziela sy Jerimota ary Iry; dimy izy, ary samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery avokoa; ary ny Isany araka ny firazanany dia efatra amby telo-polo amby roa arivo sy roa alina.
Ary ny zanakalahin'i Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenay sy Omry sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Bakera.
Ary ny isany araka ny firazanany amin'ny fireneny, izay samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery, dia roanjato sy roa alina.
Ny zanakalahin'i Jediaela dia Bilana; ary ny zanakalahin'i Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Ehoda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Ahisahara
Ireo zanakalahin'i Jediaela rehetra ireo, araka ny lohan'ny fianakaviany, dia roan-jato amby fito arivo sy iray alina no isan'ny lehilahy mahery azo nalefa hanafika.
Sopima koa sy Hopima, zanakalahin'Iry, ary Hosima, zanakalahin'i Ahera.
Ny zanakalahin'i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera sy Saloma, samy zanakalahin'i Bila ireo.
Ny zanakalahin'i Manase dia Asriela, Izay naterany; fa ilay Syriana vaditsindranony kosa no niteraka an'i Matira, rain'i Gileada.[Heb. Aramiana]
Ary Makira naka vady ho an'i Hopima sy Sopima; ny anaran'ny rahavaviny dia Imaka; ary ny anaran'ny manarakaraka dia Zelofada; ary Zelofada nanan-janakavavy.
Ary Imaka, vadin'i Makira, niteraka zaza, ahy, ka Paresy no nataony anarany; ary Saresy no anaran'ny rahalahiny; ary ny anaran'ny zananilahy dia Olama sy Rakema.
Ary ny zanakalahin'i Olama dia Bedana. Ireo no zanakalahin'i Gileada, zanakalahin'i Makira, zanakalahin'i Manase.
Ary Hamoleketa anabaviny niteraka an'Isehoda sy Abiezera ary Mahala.
Ary ny zanakalahin'i Semida dia Ahiana sy Sekema sy Liky ary Aniama.
Ary ny zanakalahin'i Efraima dia Sotela (Bareda no zanakalahin'i Sotela, Tahata no zanakalahin'i Bareda, Elada no zanakalahin'i Tahata, Tahata no zanakalahin'i Elada,
Ary Efraima, rainy nisaona azy ela, dia avy ny rahalahiny hampionona azy.
Ary nony niray tamin'ny vadiny izy, dia nanan'anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Beria, satria nisy fahoriana tao an-tranony tamin'izany.
Ary Refa sy Rasefa no zanakalahin'i Beria, Tela no zanakalahin'i Rasefa, Tahana no zanakalahin'i Tela,
Ladana no zanakalahin'i Tahana, Amihoda no zanakalahin'i Ladana, Elisama no zanakalahin'i Amihoda.
Nona no zanakalahin'i Elisama, Josoa no zanakalahin'i Nona.
Ary ny taniny sy ny fonenany dia Betela sy ny zana-bohiny, ary any atsinanana dia Narana, ary any andrefana dia Gazera sy ny zana-bohiny ary Sekema sy ny zana-bohiny hatrany Gaza sy ny zana-bohiny;
ary teo amin'ny sisin-tanin'ny taranak'i Manase dia Beti-sana sy ny zana-bohiny, Tanaka sy ny zana-bohiny, Megido sy ny zana-bohiny, Dora sy ny zana-bohiny Tamin'ireo no nonenan'ny taranak'i Josefa, zanak'Isiraely.
Ny zanakalahin'i Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvy sy Beria; ary Sera no anabavin'ireo.
Ary ny zanakalahin'i Beria dia Hebera sy Malkiela, rain'i Birzavita.
Ary Hebera niteraka an'i Jafleta sy Somera sy Hotama; ary Soha no anabavin'ireo.
Ary ny zanakalahin'i Jafleta dia Pasaka sy Bimala ary Asvata. Ireo no zanakalahin'i Jafleta.
Ary ny zanakalahin'i Samera dia Ahaia sy Rohaga sy Hoba ary Arama.
Ary ny zanakalahin'i Helema rahalahiny dia Zofa sy Jimna sy Selesy ary Amala.
Ny zanakalahin'i Zofa dia Soha sy Harnefera sy Soala sy Bery sy Jimra
sy Bazera sy Hoda sy Sama sy Silsa sy Jitrana ary Bera.
Ary ny zanakalahin'i Jatera dia Jefone sy Pispa ary Ara.
Ary ny zanakalahin'i Ola dia Ara sy Haniela ary Rizia.Ireo zanakalahin'i Asera rehetra ireo dia samy lohan'ny fianakaviany, olom-boafidy sady mahery ary lehiben'ny loham-pireneny avy. Ary ny nanisana azy, araka ny firazanany, dia enina arivo amby roa alina no isan'ny azo nalefa hanafika.
Ireo zanakalahin'i Asera rehetra ireo dia samy lohan'ny fianakaviany, olom-boafidy sady mahery ary lehiben'ny loham-pireneny avy. Ary ny nanisana azy, araka ny firazanany, dia enina arivo amby roa alina no isan'ny azo nalefa hanafika.
1 Tantara 7:1
1 Tantara 7:2
1 Tantara 7:3
1 Tantara 7:4
1 Tantara 7:5
1 Tantara 7:6
1 Tantara 7:7
1 Tantara 7:8
1 Tantara 7:9
1 Tantara 7:10
1 Tantara 7:11
1 Tantara 7:12
1 Tantara 7:13
1 Tantara 7:14
1 Tantara 7:15
1 Tantara 7:16
1 Tantara 7:17
1 Tantara 7:18
1 Tantara 7:19
1 Tantara 7:20
1 Tantara 7:21
1 Tantara 7:22
1 Tantara 7:23
1 Tantara 7:24
1 Tantara 7:25
1 Tantara 7:26
1 Tantara 7:27
1 Tantara 7:28
1 Tantara 7:29
1 Tantara 7:30
1 Tantara 7:31
1 Tantara 7:32
1 Tantara 7:33
1 Tantara 7:34
1 Tantara 7:35
1 Tantara 7:36
1 Tantara 7:37
1 Tantara 7:38
1 Tantara 7:39
1 Tantara 7:40